Ity hetsika ity dia ohatra ara-paminaniana momba ny fifohazana ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy vaovao ny fampiroboroboana izany fa efa voalaza sahady ara-paminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Saingy nafenina ny fampiroboroboana ary nisy tsiambaratelo nambara voalohany tao amin'ny Testamenta Vaovao.
1 Kôr 15:51. Indro, lazaiko aminao ny tsiambaratelo: Tsy tokony matory daholo isika rehetra fa hovana daholo.
Mahaliana ny manamarika fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Hanok. Hiaraka amin'i Jesosy isika. Raha nahazo an'i Jesosy isika dia vonona rehefa hitondra azy ho antsika izy.
Hanok tsy hita i Hanok, satria tampoka dia lasa izy. Toy izany koa ny mino an'i Jesosy Kristy. Tampoka teo dia lasa izy ireo ary tsy ho hitanao intsony, satria an-trano miaraka amin'i Jesosy Kristy izy ireo izao.
He 11: 5. Finoana no nidina i Enoka [Hanok] mba tsy hahita fahafatesana, ka tsy hita intsony, satria nentin'Andriamanitra. Satria talohan'ny nakarina azy izy dia nandray ny fanambarana izay ankasitrahan'Andriamanitra.
Nino an'Andriamanitra Andriamanitra i Enoka (Hanok), ary nidina koa izy. Raha mino an'i Jesosy ianao ary voavonjy, dia ho afaka hipetraka ianao ary hihaona amin'i Jesosy eny amin'ny rivotra. Tsy havela hijanona eo ianao.
ny fijoroana ho vavolombelona
Ny zavatra iray mahaliana dia ny manamarika fa talohan'ny nakan'i Enoka Andriamanitra dia nanana ny fijoroany ho vavolombelona izy fa nahafaly an'Andriamanitra. Raha nahazo an'i Jesosy ianao ary voavonjy, dia manana fijoroana ho vavolombelona ao am-ponao fa zanak'Andriamanitra ianao. Mazava tsara ao an-tsainao io fijoroana ho vavolombelona io. Tsy misy isalasalana. Fantatra fa voavonjy sy an’Andriamanitra ianao.
1 Jao 5: 10-11. Izay mino ny Zanak'Andriamanitra dia manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia nampandainga azy satria tsy nino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny Zanany. Ary izao no fanambarany: nomen'Andriamanitra fiainana mandrakizay isika, ary ao amin'ny Zanany ny fiainana.
Mandritra izany fotoana izany, i Hanok (Enoka) dia miandry an'Andriamanitra haka azy, tsy nipetraka tsy nijanona izy fa nitohy toy ny mahazatra ny fiainam-piainana. Niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Niasa teto amin'izao tontolo izao izy ary nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny niara-nandeha taminy.
Ny Testamenta Vaovao milaza fa nanompo an Andriamanitra velona izy ireo teo am-piandrasana ny Zanany Jesoa Kristy avy any an-danitra.
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 12:53